संस्कारी बन्ने ठेक्का छोरीको मात्रै हो ? – Education Awardees
संस्कारी बन्ने ठेक्का छोरीको मात्रै हो ?
१२ माघ २०७४, शुक्रबार २०:२४
ल्यापटप खोलेर फेसबुक लगइन मात्रै के गरेको थिएँ, म्यासेजहरु तछाडमछाड गर्न थाले, मसम्म आइपुग्न। इनबक्समा क्लिक गरें, पहिलो म्यासेज नबिनको रहेछ। उसँग कुरा गर्न थालें ।
हाई, हेल्लोपछि उसले सोध्यो, ‘के छ नयाँ खबर ?’
‘खास केही छैन यार। बरु तिम्रो सुनाऊ कस्तो चल्दैछ काम? घरतिरको खबर के छ?’ उत्तरसँगै प्रश्नपनि पठाएँ ।
‘काम ठीकठाक चलिरा’छ, घरतिरको पनि सबै ठिक छ । उम्म्म् … त्यै हो घरमा बिहेको कुरा भइरा’छ, यसपालि बढी नै सम्भावना छ ।’
उसको उत्तर सुनेर लाग्यो बा—आमासँगै ऊपनि आतुर छ, बिहेका लागि। अनि सोधें, ‘केटी पनि हेरिसक्या ?’
‘केटी फिक्स भा छैन । तर यसपालिको माघमा जसरी नि गर्ने हो। एकदिन ब्या गर्नैपर्छ ।’
पछिल्लो वाक्य अलि चित्त बुझेन। अनि सोधें, ‘लौ, काम सक्काउन पो लागेको? यसको मतलब खुशी छैनौ ?’
‘त्यस्तो पनि होइन, खुशी नै छु ।’
खै, साँच्चै खुशी भएर भन्यो कि मन नलागी नलागी मैले प्रष्ट बुझिनँ ।
‘अँ साँच्चै, अनिताको कुरा के भयो? उसलाई हेर्न गको हैन अस्ती ?’
‘तर के भयो?’ आत्तिँदै सोधें ।
‘सँस्कारै मन परेन ।’
उसको जवाफ सुनेर दिमाग फनन्न घुम्यो। रिसले आँखै देखिनँ ।
जवाफ फर्काएँ, ‘हो नि है? तिमीजस्तो सँस्कारी मान्छेलाई के मनपथ्र्यो त! सँस्कारी बन्न उसले पनि तिमीले जस्तै चुरोट तान्नुपथ्र्यो होला हैन ?’
नबिन र म साथी भएको धेरै भएको छैन। फेसबुकमै चिनेको आजभन्दा करिब तीन वर्षअघि। यो तीन वर्षको अवधिमा एक—दुईपटक भेटपनि भयो। अलि समय फेसबुकमा कुरा भएपछि उसले नै भेट्ने प्रस्ताव राखेको थियो। मैले नाइँ भनिनँ ।
त्यसपछि पनि एकदुई पटक हाम्रो भेट भयो। राम्रै कुरा हुन्थ्यो। उसँग पहिलोचोटी भेट भएको २०७१ असोजतिर हो, सायद। दशैंको छेउछाउ । त्यतिबेला म स्कुल पढाउँथें, ऊ त सरकारी जागीरे ।
खाना नमिठो भएको दिन छोरा मान्छेको जस्तो भान्सा भएछ भनिन्छ, यसको अर्थ छोरा मान्छेले नमिठो बनाएपनि हुने रहेछ । खास मेहनत गर्न जरुरी रहेनछ। बजारबाट ल्याएको तरकारी अलि नराम्रो परेछ भने, कस्तो छोरा मान्छेजस्तो हेर्दै नहेरी ल्याएको भनिन्छ । यसको अर्थ छोरा मान्छेले तरकारी छान्न दिमाग लगाउनु नपर्ने रहेछ। घर भताभुंग रहेछ भने छोरीमान्छे नभएकोजस्तो घर भनिन्छ। यसको अर्थ कोठाहरु सजाउने जिम्मा छोरीहरुको मात्रै रहेछ। आमा मामाघर गएको दिन भान्सा तयार हुन्जेलमा १५ पटकजति फोन आइसक्छ । नुन, मसला, बेसार कहाँ छ र कति हाल्ने भनेर ।
अरे यार ! समाज त महिलाप्रधान हुनुपर्ने हो, जहाँ पाइला पाइलामा उनको आवश्यकता पर्छ । आवश्यकता मात्रै होइन, उनी भइनन् भने संसारकै गति रोकिन्छ। ठप्प हुन्छ । किन भनिरहेछौ समाज पुरुष प्रधान छ? कसले भन्यो तिमीलाई समाज पुरुषप्रधान छ भनेर ?